Nagarik Shukrabar - मिठास र दृष्टिका गीतकार
शुक्रबार, ०८ चैत २०७५, १० : १७
मिठास र दृष्टिका गीतकार
बिहिबार, २० असोज २०७३, ०२ : ४७ | शुक्रवार , Kathmandu
भूपालको गीत ‘यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको, यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओढेको’ लाई खम्बुवान मुक्ति मोर्चाले पूर्वमा २०५० सालतिर राष्ट्रिय गीत नै बनायो । स्कुल–स्कुलमा ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ लाई झिकियो र सट्टामा गाउन थालियो नयाँ राष्ट्रिय गीत ।
म गीतको त्यस्तो पारखी होइन । सोखिन पनि परिनँ । सामान्य स्रोता हुँ, जो गीत सुन्छ, रमाइलो मान्छ र एकछिनमा भुलिदिन्छ । तर, केही गीत खास हुन्छन्, जो कानको परिधि छेडेर भित्र, धेरै भित्र पुग्छन् र हृदय झङ्कृत बनाउँछन् । कवि तथा गीतकार भूपाल राईका गीतमा त्यो सामथ्र्य हुन्छ । त्यसैले उनी मेरा प्रिय गीतकार हुन् ।
नेपाली समाजमा गीतको चर्चा तीजको वरिपरि मात्र हुने गरेको छ । गीत–सङ्गीत समीक्षकले नेपाली गीतलाई तीजमा लगेर लगनगाँठो जोडिदिएका छन् । हुन पनि त्यतिबेला तथाकथित लोकगायकले ल्याउँछन् भिजुअलसहित अनेक थरी गीत । मानिसहरू सुन्नभन्दा आँखा च्यातेर गीतको रसास्वादन गर्छन् । अनि, सुरु हुन्छ बहस छापातिर– ‘कता जाँदैछ नेपाली गीतसङ्गीत ?’ गीत, सङ्गीत र कलालाई बजारले खर्लप्पै निलेको कुरा पनि गरिन्छ । र, पोखिन्छ आक्रोश– ‘पुँजीवादले गर्नु ग¥यो !’ सिलसिलेवार बहस, ‘कन्टेन्ट’मा केन्द्रित अर्थपूर्ण विमर्श केही पनि हुँदैनन् । न गीत–सङ्गीतको स्तरको कुरा हुन्छ, न त भूपाल राईको नाम आउँछ ।
धेरैपल्ट सुनेँ मैले– ‘सुनको भाउ छ सुन्तला भारीको ।’ एउटा सिंगो नेपाल र त्यसको सुस्केरा र आशाले भिजेका एक–एक शब्दले मलाई प्रहार गरेका छन् । मेरी सानी छोरी कलिलो कम्मर मर्काएर यस गीतमा खूबै नाची । कुन्ति मोक्तानको नाम पाखाभित्ता हुँदै देशविदेश पुग्यो । उनले चर्चाको सगरमाथा चढिन् । तर, एउटा सामान्य स्रोतालाई के मतलब होस् यो गीत कसले लेखेको हो ? धेरै पछि थाहा भयो मलाई, यसका सर्जक रहेछन् भूपाल राई । उनै भूपाल राई त्यतिबेलाको अवस्था सम्झँदै भन्छन्– ‘यही गीत गाएर कुन्ति मोक्तान देशविदेश घुमिन्, तर गीतकारलाई कसैले सोधेन ।’ भूपालले धनकुटाको खोकु र छिन्ताङ गाउँबाट ढाकरका ढाकर सुन्तला बोकेर अरुणको गडतिरै गडतिर हिँडेर धरान ल्याई बेच्ने भरियाको विषय उनेका हुन् गीतमा ।
उनलाई मैले एउटा सचेत र राम्रो कविका रूपमा पढ्दै आएको हुँ । उनी सशक्त गीतकार पनि हुन् । सशक्त किनभने उनको गीतले केही चिज यसरी पक्रिएको हुन्छ, जसकारण उनी अन्य गीतकारभन्दा एकदमै भिन्न लाग्छन् ।
बजारमा हल्ला छ– भूपाल राईलाई जबर्जस्ती पछाडि पारिएको छ । हल्ला त यस्तो पनि छ– केही उन्मादी मान्छेहरू उनलाई निचा देखाउने उद्योग चलाइरहका छन् । तर, भूपाल राई आफ्नै सिर्जनाको बलमा अडिएको छ, टिकेको छ । एउटा असल स्रष्टा कहिल्यै पछाडि धकेलिन सक्दैन । ऊ आफ्नो रचनाको तागतले पर्दा च्यातेर रङ्गमञ्चमा उत्रिन्छ । भूपाल स्वयम् भन्छन्–‘म छापाको तिकडम जान्दिनँ । छापाकै कुरा गर्दा म हराएको देखिन्छु । तर, मेरो आफ्नो सामाजिक र साहित्यिक सक्रियता कायम छ ।’ हुन पनि भूपालको कविता र गीतले उनलाई बिर्सन दिँदैनन् । हराए भनिएका भूपाल बारम्बार सामुन्ने झुल्किरहन्छन् र सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गरिरहन्छन् ।
स्कुले जीवनदेखि नै कविता लेख्ने भूपाल २०३४ सालदेखि कविता प्रकाशित गर्दै साहित्यिक क्षेत्रमा कम्मर कसेर उत्रिएका हुन् । ४० को दशकको प्रारम्भमा सिक्किमका साहित्यकार गुमानसिंह चाम्लिङको श्याम ब्रदर्श प्रकाशनमा कविता छाप्न पाण्डुलिपि लिएर हिँडेका उनका दाजु त्यतै गायब भए । उनको प्रथम पाण्डुलिपि पनि त्यतै कतै गुम भयो । त्यसको लामो समयपछि मात्र उनले २०५३ सालमा ‘सुम्निमाको तस्बिर’ कवितासङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याउन सके । त्यसपछि ‘दाजै ! कविता गाउँमै छ’, ‘सीमान्त सौन्दर्य’ सहित उनका आधा दर्जन कृति प्रकाशित छन् ।
सञ्चार र यातायातबाट विमुख भोजपुरको सुदूर गाउँ बस्तीमा जन्मिएका भूपालले कुनै साहित्यिक संगत गर्न पाएका होइनन् । न त अग्रजको आशीर्वाद पाए न त साहित्यिक गुटमा सामेल भए । उनका दाइ गोपाल छाङ्छा कलेज पढ्दा कहिलेकाहीँ साहित्यिक कृति ल्याउँथे । त्यही बेला हो भूपालले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र मोतीराम भट्ट पढ्न पाएको । उनका दाजु नाटक लेख्ने र खेल्ने गर्थे । दाइकै प्रेरणाले उनी साहित्य अनुरागी हुन सके । एसएलसी दिएर २०३४ सालमा काठमाडौँ आएपछि दाजुले सम्पादन गरेको साहित्यिक पत्रिका ‘छहरा’मा कविता छपाउन थाले । २०४६ सालपछि सो पत्रिका साप्ताहिक भयो र भूपालले एक दशकसम्म जातीय उत्पीडनविरुद्ध निरन्तर स्तम्भ लेखे । ४० को दशकमा जातीय उत्पीडनविरुद्ध र पहिचानका पक्षमा कलम चलाउने उनी एक्लो योद्धा थिए ।
कविमनभित्र कतै न कतै गीति तŒव लुकेको हुनु अनौठो कुरा भएन । २०३० सालतिर युवाकालमा साथीभाइ गिटार बजाउँदै रातभर गीत गाएर होहल्ला गरिरहन्थे । कम्ती रमाइलो बेला थिएन त्यो । त्यतिबेलै हो भूपालको गीतसँग गहिरो प्रेम बसेको । उनी हान्निएर पुगे रेडियो नेपाल र २०३९ सालमा स्वरपरीक्षा पास गरे । अनि पक्का भयो उनी गायक बन्ने । उनले एक दशकभरि गीत गाए । ‘पूर्वै जाने रेल’ त्यतिबेला रात्रीबसदेखि घर–घरमा बज्थ्यो ।
गीत गाएर मात्र चित्त बुझेन उनलाई । भनेजस्तो स्तरीय गीत पाउने भए पो ? गीत गाउँदै गर्दा उनले गीत लेख्न थाले । अहिलेसम्म उनले पाँच सयभन्दा बढी गीत लेखिसकेका छन् । साढे दुई सय गीत नेपालका गिनेचुनेका गायकको स्वरमा रेकर्डिङ भइसकेको छ ।
‘पहिलो हरफ शिरबन्दी’ गीतसङ्ग्रह २०५९ सालमा प्रकाशित भयो । उनी दोस्रो गीत सङ्ग्रहको तयारीमा छन् । गीत समाजभन्दा अलग मानिसको हृदयमा मात्र झङ्कृत हुने लय होइन । गीतमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तŒव अन्तर्घुलित भएको हुन्छ । यो कुरालाई भूपालले जहिले पनि केन्द्रमा राखेर गीत लेखे ।
अहिले भूपाल राईको नाम दृष्टिसम्पन्न गीतकारको रूपमा चर्चाको शिखरमा छ । उनी मिठास र दृष्टिका गीतकार हुन् । भर्खरै दुबई र हङकङमा गएर उनले गीति–संवाद गरेर आएका छन् ।
उनले दश÷बाह्र वटा सिनेमामा गीत लेखेका छन् । ‘नुमाफुङ’, ‘अंशबन्डा’, ‘परदेशी कान्छा’, ‘बहादुर’, ‘माया गर्छु म’, ‘शिखर आरोहण’ तीमध्ये केही नाम हुन् । सिनेमामा कथाअनुसार गीत लेख्नुपर्ने भए पनि उनले आफ्नोपन कहिल्यै छोडेनन् ।
गीतको कमाइबारे सोध्दा उनी भन्छन्, ‘व्यावसायिक भएपछि पैसा त आउँछ । तर, मैले त्यतिमै चित्त बुझाएको छैन ।’ सिनेमाको गीतभन्दा उनलाई सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित गीत लेख्न मन पर्छ ।
गीतको कुरा गर्दा नारायण गोपालको नाम छुटाउनु हुन्न भन्ने बडेबडे सङ्गीतविद्को दाबी छ । तर, नेपाली गीत सङ्गीतलाई भ्रष्टीकरणमा कसले लग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कता सोझिन्छ, त्यो अनुसन्धानको विषय हो । भूपाल राईलाई नारायण गोपालको गीतभन्दा गोपाल योञ्जनका गीत मन पर्छन् । उनका शब्द र सङ्गीत मन पर्छन् । ‘बनेको छ पहराले’, ‘देशले रगत मागे’ जस्ता गीतले उनलाई गीत लेखनप्रति आकर्षित र संवेदनशील तुल्याएका हुन् ।
रेडियो नेपालबाट बज्ने स्वरैकल्पना र प्रेमालापयुक्त आम गीत समाजबाट धेरै टाढा हुन्छन् । जीवनशून्य र अर्थहीन भावुक गीतले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्लाएर घोर निराशामा धकेल्दछ । भूपाल आफैँ एउटा निश्चित वर्ग, जाति र संस्कृतिबाट आएको हुनाले उनले गीतमा आफ्नोपन खोजे । सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै आफ्नो संस्कृति घोलेर गीत लेखे । २०४० को दशकमा उनले सांस्कृतिक र जातीय उत्पीडनविरुद्ध कविता र गीत लेख्न थालेपछि उनलाई कैयौँ मूर्धन्य साहित्यकारले जातिवादीको ट्याग लगाइदिए । तर, त्यस्ता फत्तुरले उनी आतङ्कित भएनन् । र, उत्पीडनविरुद्ध जातीय मुक्ति र पहिचानका कुरा लेख्न छोडेनन् ।
नेपाली गीत–सङ्गीतमा अर्को धार पनि सक्रिय छ । यत्ति हो, मूलधारमा आउन जसलाई छेकबार लगाइएको छ । अर्काे धारमा सक्रिय सर्जक हुन्– रामेश, रायन, जीवन शर्मा, खुशीराम पाख्रिन, जेबी टुहुरेहरू । जब आन्दोलन हुन्छ, तिनका ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् मानिसहरू । ती हुन् जनताका असली गायक । भूपाललाई ती गीतका विषयवस्तु मन पर्छ, तर कला र शैली पक्ष कमजोर लाग्छ । ‘तत्कालीन समयमा ती गीतले धेरै महŒवपूर्ण काम गरे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसमा जीवनतŒव कम भयो । गीत भनेको विषयवस्तु मात्र होइन, त्यहाँ कला हुनुपर्छ ।’ उनको निष्कर्ष छ–‘रामेश, रायनको विषयवस्तु र गोपाल योञ्जनको कलाको सम्मिश्रणले राम्रो गीत बन्न सक्छ ।’
माओवादीले थुप्रै जनकलाकार जन्मायो दश वर्षमा । तिनले गाउँगाउँमा आफैँ गीत लेख्दै गाउँदै हिँडे । तर, खुला वातावरणमा अवतरण गरेपछि ती निरङ्कुश बजारमा टिक्न सकेनन् । राज्यले तिनीहरूको उपस्थितिलाई मान्यता दिएन । ती सामाजिक आवश्यकताले कलाकार बनेका थिए भन्छन् भूपाल । ‘कला र साधना भएन भने न गीत बाँच्छ न त गायक र गीतकार,’ उनी भन्छन् ।
अहिले बजार र प्रविधि हाबी छ गीतमा । बजारका लागि लेख्ने र बजारका लागि नै गाउने प्रचलन छ । नेपालमा हिन्दी र अङ्ग्रेजी गीतको प्रभाव बढ्नुमा पँुजी र बजारकै खेला हो । ठूलो गायक र गीतकार बन्न बजारलाई रिझाउन सक्नुपर्छ । भूमण्डलीकरणले नेपालमा पाश्चात्य प्रभाव बढाएको छ, जसले नेपाली गीतको मौलिकता हराउने खतरा बढेको छ । भूपालको विचारमा यो स्वाभाविक जस्तो भए पनि लोक साहित्य र लोक सङ्गीतको संरक्षण हुनुपर्छ ।
भूपाल कविता र गीतमा कुनै अन्तर भेट्दैनन् । उनका गीत कविताजत्तिकै विचार र कलाले भरिपूर्ण हुन्छन् । भावनालाई मात्र गीत मान्नेहरू भूपालका गीत सुनेर निराश हुन सक्छन् । उही जातीय गीत भनेर नाक खुम्चाउन सक्छन् । तर, भूपाललाई कविता र गीत त्यति धेरै भिन्न कुरा हुन् भन्ने लाग्दैन । उनी कविता जसरी लेख्छन्, गीत पनि उही मेहनतका साथ खिप्छन् ।
एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछन् उनी । उनले गीतकार र गायक भएकै भरमा राष्ट्रिय नाचघरको नियुक्ति पनि पाए । कैयौँले उनी माओवादी भएको मन पराएका छैनन् । एकपटक एउटा कार्यक्रममा एकजना जिज्ञासुले सोधेपछि उनले भने, ‘म माओवादी भएको होइन, मेरो एजेन्डा चाहिँ माओवादीले पछ्याएको हो’ । हुन पनि भूपालले माओवादीले जनयुद्ध गर्नुअघि नै उत्पीडितको पक्षमा आफ्नो लेखन केन्द्रित गरिसकेका थिए ।
भूपाल राईका प्रसिद्ध गीत
० पूर्वै जाने रेल....
० सिरानीले बिजायो कि.....
० कोही मान्छे घाम माग्छन्....
० मरी गए मुरी माटो....
० सुनको भाउ छ सुन्तला भारीको.....